फुर्सदै निकालेर पनि यो पढ्नुहोला अमेरिकामा बसिरहनु भ​एको छ भने– यि ५ कुराले तपाइको जिन्दगिमा हेरफेर गरिदिन सक्छ अमेरिकामा। - Enepalese.com
फुर्सदै निकालेर पनि यो पढ्नुहोला अमेरिकामा बसिरहनु भ​एको छ भने– यि ५ कुराले तपाइको जिन्दगिमा हेरफेर गरिदिन सक्छ अमेरिकामा।
इनेप्लिज २०७३ मंसिर २० गते १२:२८ मा प्रकाशित
अमेरिकामा यि ५ कुराहरुमा बिशेष सचेत हुनुहोस, होस पुर्याउनुहोस, बच्नुहोस र आफुलाइ हरदम सतर्क राख्नुहोस, नत्र तपाइलाइ उठनै नसक्ने गरि थला बसालिदिन सक्छ, ठुलो खति बेहोर्नु पर्नेछ र दिर्घकालिन रुपमा जिबनयापनको सबै कोणमा प्रत्यक्ष एबम अप्रत्यक्ष रुपमा नराम्ररि असर गर्नेछ भन्दा भयो।
के के हुन त ति ५ कुराहरु। एक- आफ्नो प्राइभेसि राख्नुहोस। अमेरिकि सरकारले प्रदान गर्ने सोसियल सेक्युरिटि नम्बर, आफ्नो जन्म मिति, घरको ठेगाना, घरको फोन, सेल फोन, ड्राइभर लाइसेन्स नम्बर परिचय पत्र र क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र बैक खाता नम्बर, राउटिङ्ग नम्बर र चेकबुक अत्यन्त सुरक्षित राख्नुहोला। जथाभाबि अनलाइन फर्म, अनलाइन सुचना तथा जथाभाबि शेयर नगर्नुहोला। जसबाट तपाइको आइडेन्टिटि चोरि भै फ्रडहरुको घानमा परि तपाइको बैकको डलर रित्याइदिनसक्छ, तपाइको नाममा बिभिन्न सुबिधाहरु दुरुपयोग गरि तपाइलाइ कलेक्सन कम्पनिमा जाकिदिनसक्छ। जसबाट जतिबेला तपाइको क्रेडिट ध्वस्त भैसक्ने छ जुनबेला तपाइले थाहा पाउनु हुनेछ त्यसबेला ढिला भैसक्नेछ। अति आबस्यक स्थान, कार्यालय, सरकारि काम, भरपर्दो आफन्त वा अति नजिकको भाइसाथि र बैन्किङ्ग काम र अतिआबस्यक युटिलिटि तथा सेवाप्रदाय कम्पनिहरु बाहेक अन्यलाइ सकेसम्म आफ्ना यि गोप्य कागजातहरु शेयर नगर्नुहोला। यस मामलामा धेरैलाइ बिस्वास नगर्नुहोला, कुनबेला को पराइ बनिदिने हो र तपाइलाइ वा तपाइको गोप्य महत्वपुर्ण कागजातहरु दुरुपयोग गरिदिने हो भन्न सकिदैन र को कसको मनमा पुग्न सक्छ र? घरमा, बैङको लकरमा वा आफुलाइ गोप्य लाग्ने स्थानमा मात्र यि कागजहरु सुरक्षित राख्नुहोला।
दुइ- अमेरिकामा अपराध गर्नबाट टाढै बस्नुहोला यदि तपाइ पिस अफ माइन्ड प्राप्ति, सफलता र केहि गर्छु भन्ने हो भने कुनै खाले अपराधबाट आफुलाइ बचाउनुहोस। अमेरिकामा अपराधका ऋङ्खलाहरु छन। भाइलेशन, मिसडेनियर र फेलोनि। फेलोनि सबैभन्दा सकसपुर्ण सजाय हो अमेरिकामा। अदालतबाट फेलोनिको सजाय पाउने अमेरिकनले सकेसम्म जागिर पाउदैन। सरकारि, निजि वा अर्धसरकारि वा कुनै पनि खाले जागिरमा हायर गर्ने छैनन। कुनै फेडेरल एबम राज्य स्तरको कुनै लाभावान्बित वा अमेरिकन सबिधानले अमेरिकन नागरिकहरुलाइ प्रदान गरेको नैसर्गिक सुबिधाबाट समेत बन्चित हुनु पर्नेछ। ब्यबसाय खोल्न अनुमति पाएपनि ब्यबसायमा कुनै सेवा राख्न फेलोनले पाउदैनन जसबाट ब्यबसाय एबम कुनै आयाअर्जनको काममा पनि असर पुग्नेछ। कानुनको मुलुक अमेरिकामा अपराध छिपाउन, लुकाउन, लुक्न, गुसपैठ गर्न, प्रभाबित पार्न वा मुक्ति पाउने छैन। तपाइ के बोल्नुहुन्छ यसको अर्थ राख्दैन अमेरिकामा कागज र तपाइको गतिबिधि डकुमेन्ट बोल्नेछ। अमेरिकामा स्वतन्त्रता, अबसर, सफलता र पिस अफ माइण्ड भनेकै अपराध गर्न र परिबन्दमा पर्नबाट जोगिनु जरुरि छ। कानुनसङ्ग जिस्कने, खेलाचि गर्ने, खेल्ने र लापरबाहिले अमेरिकामा सडाउनेछ।
तिन- कर तिर्नुहोस र आफ्नो आम्दानिलाइ पारदर्शि बनाउनुहोस अमेरिकामा। तपाइले नगदमा तलब बुझिरहनुभएको छ, करमा दाखिला गर्नु भएको छैन वा देखाउनु भएको छैन भने कालान्तरमा तपाइ अत्यन्त अप्ठेरोमा पर्नु हुनेछ। जसबाट तपाइ आइ आर एस आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कारबाहिमा पर्नु हुनेछ। अमेरिकमा आर्थिक अपराधलाइ ठुलो अपराध मानिन्छ र यस्तो अबस्थामा कारबाहिमा पर्नु भयो भने भबिस्यमा तपाइको ब्यबसाय एबन ब्याअक्तिगत र पारिवारिक बेनेफिट र जिबन्यापनमा ठुलो धक्का पुग्नेछ। काम गर्नुहोस, पेरोलमा आफुलाइ राख्नुहोस र अमेरिकिन सरकारले तोकेको बार्षिक आम्दानि भन्दा बढि आम्दानि देखिने भयो र तपाइको अन्य सुबिधामा जस्तै फुडस्ट्याम्प, विक तथा मेडिकेड, मेडिकेयरमा असर पुग्न खोजेमा केहि तलब नगदमा बुझेर बाकि पेरोल चेकमा राख्न सक्नुहुनेछ। यो गोप्य सुझाब हो तपाइहरुका लागि। तर काम गरेपछि कर तिर्नुहोस। यसो गर्नु भएन भने भोलि भबिस्यमा तपाइको न क्रेडिट बढ्छ, न घर किन्न पाउनु हुनेछ न गाडि पेमेन्टमा पाउनु हुनेछ न भोलि उधारो वा लोनमा केहि सुबिधा पाउनु हुनेछ। कर तिरेर कर दाखिला गर्न नबिर्सनुहोला।
त्अपाइले लाखौ लाख डलर नगदमा कमाउनु भयो, करमा दाखिला गर्नु भएको छैन भने तपाइको ति सबै आम्दानि गैरकानुनि मात्रै हुदैनकि गैरकानुनि रुपमा २ हज्जार भन्दा बढि नगद फेला पर्यो भने र तपाइले कर तिरेको प्रमाण दिन सक्नु भएन भने तपाइलाइ जेल लैजाने छ। नगद २ हजार भन्दा बढि नबोक्नुहोला यदि कानुनिसगत रुपमा कमाउनु भएको छैन भने। ९९९ भन्दा बढि डलर मनि ट्रान्सफर मार्फत नपठाउनुहोला। ९९९९ भन्दा बढिको ॠण लिनदिन गर्नु भएको छ भने चेकबाट काम गर्नुहोस। कानुनु रुपमा १० हज्जार भन्दा बढि ॠण दिएर ब्याज लिनु भएको छ भने त्यो मनि लण्ड्रि कानुनेले निषेध गरेको छ अमेरिकामा। नगदमा ढुकुटि खेल्ने, ढुकुटि चलाउने र ९९९९ भन्दा बढिको कारोबार नियमसगत नपाइएमा वा नगदको चलखेल गरेको पाइएमा वा ढुकुटि बुझेको डलर सबै गैरकानुनि हो अमेरिकामा। यदि आइ आर एसले पत्ता पाएमा ढुकुटि खेल्ने र खेलाउने सबै मनि लण्ड्रिङ्गमा जेल जान सक्नेछ। १००० डलरको मनि अडर वा मनि ट्रान्सफर गलत मानिस वा अमेरिकन सरकारले तोकेको ७००० भन्दा बढिको टेरोरिष्ट ग्रुप वा ब्याक्तिलाइ पठाइएको वा चेक पठाइएको पाइएमा सिधै जेल जानुपर्नेछ। १००० डलर भन्दा माथिको मनि अडर र मनि ट्रान्सफर गर्दा आफ्नो आम्दानिको स्रोत खोल्नुपर्नेछ। हुण्डि गैरकानुनि हो अमेरिकामा। यि सबै कामबाट बच्नुहोला। कुनैबेला जतिखेर पनि फाइनान्सियल अपराधको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।
चार-अमेरिकामा लिज, सम्झौता, सहमति वा कुनै कन्ट्रयाक्ट वा लिनादेना वा सेवासुबिधा आदानप्रदान गर्दा वा कुनै खाले लिखितम कागज गर्दा वकिल वा जानेको बुझेको मानिसलाइ देखाएर वा सम्बन्धित क्षेत्रको बिशेषज्ञलाइ देखाएर बुझेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुहोला। सरकारि, निजि, कर्पोरेट हाउसहरुले तपाइलाइ डुबाइदिनसक्छन यदि तपाइले नबुझिकन सहिछाप गरिदिनु भयो भने। फोन कम्पनि, बिजुलिबत्ति, कुनै युटिलिटि, बसाइ लिज, कुनै सेवा प्राप्त गर्दाको सम्झौता, ब्यबसाय वा कुनै भेन्डर वा कुनै कम्पनिसङ्ग सम्झौता, कन्ट्रयाक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने भाषा, त्याहा लेखिएका शब्द शब्द र हरफहरु बुझ्ने मानिस वा वकिलको सहाराबिना हस्ताक्षर नगर्नुहोला। जसले तपाइलाइ ठुलो आर्थिक एबम मानसिक क्षति पुर्याइदिनसक्छ। एकपटक नबुझिकन सम्झौता गर्नुभयो भने तपाइको दिनदशा यहिबाट शुरु हुनेछ अमेरिकामा।
पाँच-भाषा नजाने अबसर तपाइबाट टाढै छ अमेरिकामा, अबसरको मुलुक भनेर जतिसुकै घोकेपनि। अमेरिकाकामा आफ्नो आबश्यकता अभिब्यक्त गर्ने, सम्ब्रिदि र समुन्नतिको सपना बुन्ने र पुरा गर्ने र आफ्नो क्षमताको सेल गर्ने माध्यम नै भाषा हो। भाषा नहुदा ठगिने, भाषा नहुदा ह्युमिलियटेड हुनु पर्ने, भाषा नहुदा ज्ञानको अभाबमा दुख पाउने, झञझटिलो हुने, तनाब हुने र हैरानि खेप्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकामा। अङ्रेजि भाषाको अभाबमा थुप्रै नेपालिहरुले अबसर मात्र गुमाएनन अमेरिकामा प्राप्त हुने प्रिभिलेज पनि गुमाउन पुगे। शोषित मात्रै बनेनन गुणात्मक जिबनशैलिको मार्गबाट टाढिन पुगे आम अधिकाश नेपालि समुदाय अमेरिकामा। कस्ले बोल्छ उनका लागि? दोष भाषा नजान्नुमा होइन सिक्ने र जान्ने प्रयास नै नगर्ने गलत मतिले बिग्रे नेपालि अमेरिकामा। नेपालि समुदायका माझमा बसेर, गाडिमा, बाटामा नेपालि दोहोरिको गित कानमा घन्काएर अमेरिकामा भाषा जानिन्न र सिकिन्न पनि र यस्तो पाराले अमेरिकाको फड्को मारिरहेको जिबन शैली र प्रबिधिमा नेपालि बिक्न नसक्ने र टिक्न नसक्के परिस्थिति जन्मदै छ अर्कोतिर। अग्रेजि भाषा सिक आफुलाइ गुणात्मक र प्रोफेशनल बनाउ अमेरिकामा त्यति बेला मात्रै रियल अमेरिकाको क्रिमको स्वाद प्राप्त गर्नेछौ नत्र जिउ पाल्ने बाहेक केहि हुने वाला छैन अमेरिकामा। के बिग्रन्छ भाषा जानेको छैन भन्दा? लाज लाग्छ तपाइलाइ भाषा नजानेको भन्दा? लाजले तपाइको कदलाइ ओरालो मात्रै लगाउदैन, नजानेको कुरा नौटङ्किमा बिताउदा अरु थुप्रै हन्डरको सामाना गर्नु पर्ने हुन्छ।
अरु थुप्रै छन सचेत हुनुपर्ने कुराहरु बाकि अन्य भागमा निरन्तर लेखिरहने छु। केहि जानुपरेमा बुझ्नु परेमा वा जानकारि आबस्यक भयमा मेरो फेसबुकको इनबक्समा सम्पर्क गर्नुहोला।